त्रिशुलीमा दुर्घटना जिरोमा पार्नु नै अभियानको लक्ष्य हो « Sansar News
६ मंसिर २०७४, बुधबार ०८:५२
११ गते कार्तिक बिहान सप्तरीबाट काठमाडाँै आउँदै गरेको बस त्रिशुलीमा खसेर ३३ को मृत्यु भएपछि भावुक हुँदै विदेश बस्ने नेपालीहरुले त्रिशुलीमा पर्खाल बनाउनु पर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान सञ्चालन गरे । त्रिशुली सुरक्षा पर्खाल अभियान शुरु गर्दा पोल्याण्डमा कार्यरत पानी अभियानकर्ता मित्रलाल पार्देले “मान्छे त्रिशुलीले निलेको निल्यै छ राजनिति मान्छेको टाउको गन्नमै सिमित नेपाली जनताहरु धनी भएर पनि गरिब छौ भनेर सधै बिलौना गरिरहेका छन् । राजनिती त के भनु भन्ने शब्द पनि छैन । सरकार सधै मगन्ते भन्दा अरु कुरा गर्न जान्दैन । हिम्मत गरौ हे नेपाली जनताहरु हो साथ दिनुहोस् हामी अगाडि सर्न सक्छौ अब मागेर भिखारी बनेर होइन हामिले आफ्नै सोचले ।” स्टाटस पोस्ट गरे । त्रिशुलीले मान्छे निलेपछि हार्दिक समवेदना होइन “त्रिशुली पर्खाल अभियान” हार्दिक आव्हान गरौ । हामीलाई नारा होइन सहारा चाहिएको छ । तपाइहरु कसले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कृपया आफ्नो विचार दिनुहोस् सम्वेदना होइन रिप होइन । त्रिशुली पर्खाल अभियान तत्काल शुरु गरौ सरकार तत्काल साथ देल अब बिदेशी दाताहरुको भर परेर कति आफ्ना नागरिकको हत्या गराउछस् । तत्काल , तत्काल ,तत्काल काम शुरु गर वा गरौ…… त्यसपछि त्रिशुली सुरक्षा पर्खाल अभियानमा म पनि भागिदार हुन चाहन्छु भन्दै सञ्जालहरुमा ऐक्यबद्धता व्यक्त आ–आफ्नो तर्फबाट ऐक्यबद्धता जनाइए । यो भावनामा आएको अभिव्यक्तिमात्र हो वा साँच्चैको सुरु हुन्छ भनेर त्रिशुली पर्खाल अभियानको सोच ल्याउने पार्देसँग गरिएको कुराकानी :
त्रिशुलि पर्खाल अभियान सामाजिक सञ्जालमा चर्चा मात्र हो की साँच्चै अभियानले सार्थकता पाउला ?
शुरुमा आम रूपमा सबैलाई अभियानको उद्देश्य बारे जानकारी गराउनु छ । अनि कसैले भावनात्मक रुपले बोलेको लाखौ रुप्पे लिनु भन्दा त्रिशुली बहस राखेर निचोडमा पुग्ने गरी कार्यक्रम अगाडि लिने गरी बहस भैरहेको छ । त्यसै कारणले तत्काल १ युरो दिन मिल्ने गरी बढीमा १००० युरो भन्दा धेरै अहिले न उठोस यद्यपि प्रतिबद्धता ४ लाख भैसकेपछि काम अगाडि बढाउन हरेक व्यक्तिहरूसित बहस गर्दै निचोडमा पुगेर कार्यान्वयन गर्ने हो ।
अभियानप्रति मान्छेको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ?
त्रिशुली सुरक्षा पर्खाल अभियान अहिले बहसमा छ । त्रिशुली सुरक्षा पर्खाल अभियान बारे अत्यन्त सकारात्मक प्रतिकृया पाएको छु । अत यो अभियानलाई सशक्त रूपमा बढाउन सकिन्छ ।
एकछिनको भावनामा गरेको निर्णय के पुरा गर्न सकिएला ?
कानुनी रूपमा बैन्क अकाउन्ट खोल्नमा र हरेक क्षेत्रमा कृयाशिल व्यक्तिहरुको निचोडले र प्राविधिकहरुको प्रोजेक्ट तयार पार्न सकियो भने करोडौं रकम जुट्न गार्हो छैन । अनि सरकारले नै साथ दिएमा अवश्य सजिलो हुने थियो ।
कहिले देखि यो अभियान सञ्चालन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
हामी सबैको सोचलाई एकत्रित गर्दै अभियानको रुप निर्धारण गर्ने हुदा तत्काल बहस र पर्खाल लाउन सम्भावना छ कि छैन खर्च के कति लाग्छ सरकारको सोच के हुन्छ आदि इत्यादिको मुख्य स्वरुप लिदै र प्राविधिकहरुले पर्खाल लगाउन सम्भव छ सफल छ भनेको अवस्थामा ट्रस्ट निर्माण गरी त्यही त्यहि ट्रस्टमा रकम जम्म गरी काम अगाडि बढाउने अहिले बहसको चरणमा भएको जानकारी गराउछु ।
हालै चलाउनुभएको पानी अभियान पनि नियमित छ, पानी अभियान कहाँ पुग्यो ?
पानी अभियानमा झन्डै ५० लाख स्वस्फूर्त घोषणा भो । कसैसित नमागेर अभियान सफल पार्छु भनेकोले स्वस्फूर्त रुपमा झन्डै ३८ लाख जनता एवं सरकारले पनि साथ दिए नगरपालिकाले १० लाख छेट्यायो । ढल तथा खानेपानी विभागले २ लाख बजेट पार्यो र हरेक वर्ष पानी योजनामा सरकारले पनि साथ दिने गरी पानी अभियान अगाडि बढिरहेको छ । हरेक नागरिक इच्छुकलाई अहिले अभियानकै खातामा घोषणा गरेको रकम जम्मा गर्न पनि अनुरोध गरेको छु । यद्यपि उनिहरुको स्वैच्छिक रुपमा गरेको घोषणा भएकोले म माग्ने गरेको छैन । अनुरोध गरेको छु । त्यसो त अब पानी अभियानमा कसले कति रकम जम्मा गरे सबै watercampaignsite.wordpress.com बाट प्रसारित गर्नेछु । सबै दस्तावेजको रूपमा । गाउँमा पानी बोरिङ पनि खनियो । अब ट्यान्की बनाउनुछ पाइप किन्नु छ । सरकारले पनि साथ दिएकोले अभियानको उद्देश्य अनुरुप अगाडि बढेको जानकारी गराउदछु । अभियान शुरु भए पछि त्यही गाउँमा अर्को बोरिङ सरकारले पनि खनिदिन शुरु गर्यो मैले ८०० परिवारको लागी करोड सोचे तर पछि सरकारले अभियान शुरु भएपछि पानीको लागी त्यही गाउँ योजना बनायो । मेरो उद्देश्य सरकार सित चुनौती लिनु होइन कि जुन नारा अगाडि सारे र पानीको व्यवस्था हुनु नै अभियानको मुल मर्म हो । अझ धेरै बुझ्नु परेमा सुनपुर पानी संयोजकलाई पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
कति रकम लाग्ला ? काम आफ्नै तर्फबाट गर्ने सोच्नु भएको छ की ?
यसको लागी शुरूवात बहसमा जादै पर्खाल सम्भव छ र खर्च विवरण अनि कानुनी प्रावधान आदि बारे बिभिन्न व्यक्तित्वहरुबाट निचोड निस्कियो र बिभिन्न वर्गका व्यक्तिहरुको निचोड अनि सरकारको निचोड समायोजन गर्दै त्रिशुलीमा दुर्घटना जिरोमा पार्नु नै अभियानको लक्ष्य हो ।
पर्खाल निर्माणले यस्ता सडक दुर्घटना कम गर्न सक्ला ?
त्रिशुली पर्खाल अभियानको उद्देश्य पर्खाल मात्र नभएर दुर्घटना जिरो पार्ने जागरण अभियान पनि बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु । शुरूवातमा जागरुक बनाएपछि अन्तिम लक्ष्य त्रिशुलीमा सरकारलाई दुर्घटना जिरो पार्न बाध्य पार्नु बिभिन्न प्रविधिको प्रयोग गर्नु गराउनु र यदि ती प्रविधिको लागी खर्च धेरै लागेमा सबैसित अनुरोध गर्दै अगाडि बढ्नु पनि अभियानको लक्ष्य हो । हरेक जनसमुदायको सकारात्मक सोच भो भने यो अभियान अत्यन्त प्रभावकारी र सफल हुन्छ ।